आज शुक्रबार, शुक्रबारको दिनमा दक्षिणकालीमाईको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ पौष २७ गते शुक्रबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।। #जय_दक्षिणकालीमाई !! – सुदूरखबर डटकम
आज शुक्रबार, शुक्रबारको दिनमा दक्षिणकालीमाईको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ पौष २७ गते शुक्रबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।। #जय_दक्षिणकालीमाई !!
श्रीसूर्य दक्षिणायन,हेमन्तर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल पुष २७ गते शुक्रबार नेपाल सम्बत ११३९ पोहेलाथ्व तदनुसार सन् २०१९ जनवरी ११ तारिक शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि अपरान्ह ४ वजेर १६ मिनेटसम्म उप्रान्त षष्ठी तिथि,पूर्वभाद्रा नक्षत्र २८ गते विहान ५ वजेर ३७ मिनेटसम्म उत्तरभाद्रा नक्षत्र, वरियनयोग, बालवकरण,आनन्दादियोग ध्वाँक्ष,सूर्य धनु राशीमा,चन्द्रमा राती ११ वजेर ६ मिनेटसम्म कुम्भ उप्रान्त मीन राशीमा ।
राहुकालः–अशुभ विहान १० वजेर ५३ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर १२ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–अपरान्ह २ वजेर ४९ मिनेटबाट ४ वजेर ७ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य विहान ८ वजेर १६ मिनेटबाट ९ वजेर ३४ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ विहान ९ वजेर ३ मिनेटबाट ९ वजेर ४५ मिनेटसम्म र मध्यान्ह १२ वजेर ३३ मिनेटबाट अपरान्ह १ वजेर १४ मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५१ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ३३ मिनेटसम्म रहनेछ ।
सूर्योदयबाट प्रातः ८ वजेर १६ मिनेटसम्म चर वेला,८ वजेर १६ मिनेटबाट ९ वजेर ३४ मिनेटसम्म लाभ वेला,९ वजेर ३४ मिनेटबाट १० वजेर ५३ मिनेटसम्म अमृत वेला,१० वजेर ५३ मिनेटबाट १२ वजेर ११ मिनेटसम्म काल वेला,१२ वजेर ११ मिनेटबाट १ वजेर ३० मिनेटसम्म शुभ वेला,१ वजेर ३० मिनेटबाट २ वजेर ४८ मिनेटसम्म रोग वेला,२ वजेर ४८ मिनेटबाट ४ वजेर ७ मिनेटसम्म उद्वेग वेला र ४ वजेर ७ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म चर वेला रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ७ वजेर ८ मिनेटसम्म रोग वेला,७ वजेर ८ मिनेटबाट ८ वजेर ५० मिनेटसम्म काल वेला,८ वजेर ५० मिनेटबाट १० वजेर ३१ मिनेटसम्म लाभ वेला,१० वजेर ३१ मिनेटबाट १२ वजेर १३ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१२ वजेर १३ मिनेटबाट १ वजेर ५४ मिनेटसम्म शुभ वेला,१ वजेर ५४ मिनेटबाट ३ वजेर ३५ मिनेटसम्म अमृत वेला,३ वजेर ३५ मिनेटबाट ५ वजेर १७ मिनेटसम्म चर र ५ वजेर १७ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म रोग वेला रहनेछ ।
हिसाव किताव गरेर काम गर्नु होला दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । आफन्तबाट बोलीको मात्र होइन व्यवहारिक सहयोग पनि पाईनेछ । विरोधीहरु कमजोर बन्नेछन् । नोकरी तथा राजनीतिबाट फाइदा लिन सकिनेछ । काममा ढिला सुस्ति नगर्नु होला ।
कार्य क्षमता बढ्नेछ । सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । इज्जत प्रतिष्ठा वृद्धि हुने खालका काम हुनेछन् । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ । कुरा काट्नेहरु समर्थनमा आउने छन् । सामाजिक काममा अभिरुची बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् । आफन्तबाट सहयोग सल्लाहा सुझाव मिल्नेछ ।
धर्म कर्म तिर मन जानेछ । अरुको भलाईमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु होला । खानपानमा ध्यान दिनुहोला नत्र स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । यात्राको सम्भावना देखिन्छ । नोकरी तथा राजनीतिबाट सन्तुष्टि कम मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा भने थोरै प्रगति हुनेछ ।
दिन प्रतिकुल देखिन्छ । वचाएर राखेका पौराणिक कुरा नष्ट हुनसक्छन् सचेत रहनु होला । सयोग गर्ने भन्द खुट्टो तान्नेको संख्या बढि हुनेछ । काम गर्ने बातावरण त्यति सहज देखिदैन । भाग्यले कम साथ दिनेछ । मानसिक तनाव बढ्न सक्छ । जोखिम मोलेर नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला ।
समयको उपयोग गर्नु होला पछि यो समय आउने छैन । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाटबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । आर्जित धनलाई वचतमा परिणत गर्न गाह्रो हुनेछ । विदेश यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । लोभ मोह बढ्नेछ । काममा ढिला सुस्ति नगर्नु होला । पढाई लेखाईमा खासै प्रगति हुने छैन ।
बढि महत्वकाँक्षी नबनि काम गर्नु होला । हेलचक्र्याई भयो भने उपलब्धि गुम्नेछ । विरोधीको सामना गर्नु पर्नेछ । गोपनियता अप्नाएर कार्य योजना अगाडि बढाउनु होला । स्त्री एवं सन्तानको चिन्ताले छोड्ने छैन । मेहनतका साथ गरेका काम सफल हुनेछन् । संघर्षबाट मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ ।
समयमा पूर्ण सुधार देखिदैन तर समस्या भने केहि घट्ने छन् । सवैलाई आफ्नो ठान्नु धोका हुनसक्छ । दूर्जनका कारण धन खर्च हुनेछ । पढाई लेखाईमा मन जानेछ । वौद्धिक व्यक्तित्व सँग भेटघाट हुनेछ । सन्तान सुख कम मिल्नेछ । स्त्रीको सहयोग लिएर काम गर्दा केहि सहज हुनेछ । घर वाहिर बढि आनन्द मिल्नेछ ।
समय सहज देखिदैन । शारीरिक एवं मानसिक शिथिलता बढ्नेछ । अनावस्यक विषय बस्तुमा समय खेर जानेछ । खर्चालु काम धेरै गर्नु पर्ला । घरयासी प्रयोजनको लागि समान खरीद हुनेछन् । आहार विहारका कारण स्वास्थ्यमा खरावी हुनसक्छ । आस्था र विश्वास घट्न सक्छ । आफन्तबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ ।
ग्रह गोचर ठीकै देखिन्छ । उद्योग,पराक्रम घट्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । अरुको भर पर्दा उपलब्धि थोरै हुनेछ तस्मात् आफ्नो काम आफै गर्नु होला । पढाई लेखाई मन्द रहनेछ । सहयोग गर्ने भन्दा कुरा काट्ने बढि हुनेछन् । राजनीतिमा धेरै चासो नदिनु होला । आर्थिक कारोवार गर्दा चनाखो हुनुहोला ।
समय मध्यम खालको देखिन्छ । हेलचक्र्याई कहि कतै नगर्नु होला । ऋण लगानी नगर्नु होला पछि उठाउन गाह्रो हुनसक्छ । इष्टमित्र साथी भाईमा अल्प प्रेम होला । हृदयबाट सहयोग गर्ने कमै हुनेछन् । विवाद देखि टाढा बसी आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुहोला । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापारबाट थोरै आम्दानी हुनेछ ।
काम गर्ने उत्साहा घट्ने छैन । काममा देखिएका समस्या कम भएर जाने छन् । फजुल खर्चमा कमी आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । आम्दानी खर्च बराबरै जस्तो हुनेछ । वचतमा जोड दिनुहोला । भोज भतेर,धार्मिक कार्यमा सहभागि हुन पाईनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अधिकारको खोजी हुनेछ ।
समयले साथ कम दिनेछ । प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला । पढाई लेखाईमा खासै प्रगति हुने छैन । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । परिवारको स्वस्थ्यमा समस्या आउनेछ । जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला । अहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।